Ndị ọkachamara Semalt na-eweta Thezọ ndị iji nyochaa arụmọrụ Seo gị na njikwa ọchụchọ Google
Na-achọ iru TOP, mana ị gaghị enwe ike? Ndị ahịa enweghị ike ịchọta saịtị gị? Nyochaa, nyochaa ma chọpụta azịza ya site na iji nyocha ọrụ weebụ nke Semalt . Ngwá ọrụ nyocha isiokwu anyị na-enye ọkwa saịtị na nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ Google ma na-atụ aro isiokwu maka nkwalite ezubere iche.
Chọpụta ihe ndị mmadụ na-achọ ma gwa ha ihe dị ha mkpa. Lelee ọkwa nke ndị na-emegide gị, kpughee nzuzo nke ihe ịga nke ọma ha wee jiri ihe ọmụma ọhụrụ maka nkwalite ịntanetị gị. Gụpụta akụkọ zuru ezu banyere njehie ndị meziri emezi na ọkwa dị mma maka nyocha mgbe ịchọrọ ya. Buru onye isi web ma nwee ulo gi.
Jiri ngwa Semalt tulee idozi okwu nke isi okwu na onye nyocha wee mee ihe omume:
Lelee n'usoro saịtị gị
Mepee ọhụhụ ya na Web
Chọọ saịtị ndị na-asọmpi
Chọpụta njehie njikarịcha ibe
Nweta mkpesa banyere ide ọnọdụ weebụ zuru ezu
Nchịkọta weebụ anyị bụ ngwaọrụ nyocha nke ndị ọkachamara maka webmasters na-emeghe ọnụ ụzọ iji nweta ohere ọhụụ iji nyochaa ahịa, ọnọdụ gị na nke ndị asọmpi gị yana nyocha ahịa nke ọma.
Gịnị mere i ji chọọ ya?
Njikwa nke saịtị gị
Imezu onodu kwesiri ekwesi na Google aburula ebe di ire agha. Nke a bụ ebe akụkụ dị ukwuu nke atụmatụ ịntanetị gị kwesịrị iduzi. Ya mere, odi nkpa iji nyochaa ọganihu gị ma ọ bụ ọdịda gị.
Ọ na-enye gị ohere inweta foto zuru ezu banyere ebe ụlọ ọrụ gị dị n'ahịa. Ihe nyocha a na - enyere gị aka ịkọpụta isi ihe na ọrụ gị n'ọdịnihu: jupụta saịtị gị na ọdịnaya dabere na ezigbo isiokwu, zụta / mgbanwe njikọ dị ka isi okwu ndị kwekọrọ, wdg.
Jide ọnọdụ nke ndị asọmpi gị
Nyochaa zuru oke na nyocha nke ndị asọmpi gị bụ ihe kachasị mkpa nke nyocha ahịa zuru oke. Nchịkwa asọmpi na-enye gị ohere inyocha ike na adịghị ike nke ndị asọmpi n’ahịa gị na iji mepụta atụmatụ dị mma iji bulie uru asọmpi gị.
Semalt ga - eduzi gị site na usoro nyocha asọmpi nzọụkwụ, na-enyere gị aka ịmata ndị asọmpi gị, kpebie ma tụọ àgwà ha, chọpụta ike na adịghị ike ha, wee chọpụta ebumnuche ha na atụmatụ ha na mpaghara ahịa gị.
Nchịkọta Semalt ga-ekpughe nkọwa niile nke ebe ndị asọmpi gị kwụ n'ahịa. Iji ozi a nke ọma ga - enyere gị aka ịmebe nke ọma na njikarịcha igwe, nkwalite na mkpọsa mgbasa ozi.
Nchoputa nke ahia ohuru
Inwe usoro nnweta ahịa siri ike na ịchọpụta ahịa ọhụrụ bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọ bụla. Na-enweghị ya, ị ga-enwe ihe isi ike ka ị na-eto azụmahịa gị n'ụzọ bara uru. Nke ahụ kwuru, otu n'ime akụkụ kachasị sie ike iji kpoo azụmahịa bụ ikpebi ụzọ kachasị akwado maka ịdọta ahịa ọhụrụ.
Ihe omuma a enwetara site na nyocha nke ahia gi na-enye ohere ohuru maka ikesa ngwongwo na oru ya na iwulite akara aka gi na obodo ekwuputara, ya mere na-akpali ulo oru gi itule atụmatụ metụtara mpaghara, wdg.
Ntughari nke data na PDF na Excel
Agaghị eleda ịdị mkpa nke ọrụ a anya n'ihu ndị ahịa na njikwa ya. I nwere ohere puru iche iji mepụta mkpesa iji mara ma gosi ha ndi ozo n'okpuru udi ahia gi.
Nchịkọta Semalt gụnyere
Okwu ndenye gbara m ume
Anyị na-enyere gị aka ịhọrọ isiokwu azụmahịa dabara adaba.
Enweghị mkpa maka ngwa nchọta isiokwu. Were isi okwu ndi osompi gi, ozi zuru oke na PPC na SEO, data Google na teknụzụ ọchụchọ nke anyị. Ihe ị ga - eme bụ ịhapụ ndị ọrụ nchịkwa na ndị ọkachamara Semalt.
Jiri anya nyochaa oge nyochaa ma nyochaa ọnọdụ nke igodo gị. Nchịkwa ọnọdụ isiokwu bụ usoro nyocha na nyocha nke ezigbo okwu ọchụchọ ndị ọrụ ntanetị na-abanye na ngwa ọchụchọ.
Ihe omuma nke inwere ike inweta banyere ezigbo okwu achoro a nwere ike inye aka mee ka a mata ihe di n’ime gi, ma gha azuta ahia gi.
Kedu ihe kpatara nyocha isiokwu dị mkpa?
Ọtụtụ mgbe, anyị na-anụ ka SEO siri gbasawanye n’ime afọ iri gara aga, na etu isi okwu n’onwe ha siri bụrụ ike anyị nwere ịza nke ọma na ọchụchọ ndị mmadụ na-eme kwa ụbọchị.
Nlele kwa ụbọchị banyere ọnọdụ saịtị gị na sistemụ nyocha.
Nchọgharị nke asọmpi ahụ
Nchoputa na nyocha nke nyocha ihe nchoputa nke ndi osompi.
Njikwa akara aka gi
Ihe onyonyo nke udi ihe gi di ezigbo mkpa, ebe 77% nke ndi nwere olile anya gha achotaghi gi.
Ọ bụ okwu na-atụ ụjọ maka echiche dị mfe. Akara gi bu ihu ulo oru gi. Jiri ya gwuo egwu, ndị mmadụ nwekwara ike nwee nsogbu ịmata gị. Mee ka ọ dịgide agbanwe, n'oge na-adịghị anya ị ga-ewu ezigbo aha.
Contchịkwa njirimara ụlọ ọrụ gị abụghị naanị ihe dị mma maka ndị ahịa gị. Emechala nke ọma, njikwa ika nwere ike ịchekwa gị oge dị ukwuu, ọ bụghị ịkọ maka nrụgide.
Ihe omuma a gosiputara onu ahia gi, na-enye gi ohere ikwuputa usoro mmekorita gi nke oma.
Onye nyocha weebụsaịtị
Nyocha zuru oke nke saịtị gị na mmepe saịtị yana ihe ndị ụlọ ọrụ SEO chọrọ.
Nyochaa SEO Ntanetị | Nnyocha nyocha SEO
Ngwa nchọta na - eji ọtụtụ ihe wee chekwaa weebụsaịtị. Onye nyocha weebụsaịtị bụ ngwa ọrụ nyocha SEO na-enyocha ihe ndị a na ihe ndị ọzọ. Ọ na - enyere gị aka ịchọpụta nsogbu ndị nwere ike igbochi ogo ogo saịtị gị. Site n'ịrụ nyocha saịtị SEO zuru ezu, ngwá ọrụ anyị na-enye gị nyocha zuru ezu nke data SEO saịtị gị, dị ka meta meta, nchịkọta Google SERP, saịtị saịtị, Robots.txt na ọtụtụ ọnụ ọgụgụ ndị ọzọ dị mkpa.
Analysis Weebụsaịtị | Nyochaa Ihe Ntanetị Weebụ
Na mpaghara nyocha nke ngwa nyocha weebụ, ị nwere ike ịme nyocha zuru oke banyere okporo ụzọ weebụsaịtị wee chọpụta ogo weebụsaịtị gị zuru ụwa ọnụ. Ihe a niile na ihe ndị dị mkpa dị ka ntaramahụhụ maka weebụsaịtị gị. You nwere ike iji igwe data ndị a wee hazie atụmatụ weebụsaịtị gị.
Mgbe ị debanyere aha na saịtị anyị, ị na-amalite usoro nchịkọta data ma na-enweta akụkọ zuru ezu banyere ọnọdụ nke weebụsaịtị gị na nke ndị asọmpi gị, yana nrube isi saịtị gị na iwu saịtị na ụkpụrụ ụlọ ọrụ SEO. Ọ bụrụ na ịnweworị akaụntụ, ịnwere ike itinye ọrụ ọhụụ (weebụsaịtị) na ohere nke gị, usoro ahụ ga-enyocha ya.
N'oge nyocha nke saịtị gị, sistemụ anyị na-ewepụta isi okwu na-ebute ahịa na nleta dabere na ọdịnaya na meta meta = '' isi okwu '' data enwetara site na nyocha nke weebụsaịtị gị. Nwere ike itinye ederede nke gị ma ọ bụ wepu akara dị adị n'oge ọ bụla.
Mpaghara mpaghara ọ bụla na-enye ohere ọchụchọ n'ịntanetị n'asụsụ nke ịhọrọ kwadoro site na ngwa ọchụchọ 338 Google. Igwe ndị a niile na-ekpebi ogo ogo saịtị gị na Semalt.
Ọ bụ ya mere Semalt na-adụ ọdụ iji ọtụtụ ọdụ ọchụchọ maka nyocha nke saịtị gị. You nwere ike ịhọrọ ọtụtụ igwe nchọta maka nyocha weebụsaịtị ka ịchọrọ.
Kwa ụbọchị, anyị na-enyocha ọnọdụ nke saịtị ahụ ma na-agbaso ọganihu ha. Na mgbakwunye, anyị na-achịkọta ozi gbasara ndị asọmpi gị (ma ọ bụrụ na i kpebie nyochaa saịtị ha).
N’adịghị ka saịtị ndị ọzọ, anyị na-emelite ọnọdụ gị oge niile, nke na-enye gị ohere pụrụ iche iji soro ọnọdụ saịtị gị n'ịntanetị n'oge ọ bụla n'ụbọchị ma hụ mgbanwe ndị kachasị ọhụrụ.
Na-enweta ọtụtụ nzacha nke ga - eme ka ọrụ gị na data dị mfe ma nyere gị aka ịme mkpebi maka ịga nke ọma n'ọrụ gị.
You nwere ike chịkọta mkpụrụokwu gị iji nyochaa otu akụkụ azụmahịa gị ma were ndetu bara uru nke a ga-egosipụta na ngwaọrụ ọrụ ma jikọta ya na ụbọchị a kapịrị ọnụ.
I nwekwara ike iji sistemu API. Enwere ugbua otutu uzo nke izipu ozi. Ihe ngosi di na uzo ihe ndi ato kachasi nma n’ime ha. Nke ikpeazụ a dabara adaba n'ihi na data ahụ na-emekọrịta na akpaghị aka, na-enye ndị ọrụ aka ilele ozi emelitere. Ọ dịghị mgbalị ịchọrọ. You nwere ike ịlele nyocha data nke ụbọchị ọ bụla site na isi mmalite ọ bụla.
A na-ewetara gị nyocha niile na akụkọ nyocha zuru ezu nke tụgharịrị na PDF ma ọ bụ CSV (White Label & Semalt Label) ị nwere ike ibudata na weebụsaịtị anyị.
Enwekwara ike izipu akụkọ ndị ahụ na adreesị ozi-e e gosiri, dabere ugboro ole ị họọrọ. Nke a ga - aka mma gbanwee echiche gị yana iwepụta ọkwa nke oganihu gị na ndị ọzọ.
Onye njikwa gị ga-ahụ maka ị na-enyocha ọganiihu gị ma ọ dị maka ịgụta ma ọ bụ ajụjụ n'oge ọ bụla. Nwere ike ịkpọtụrụ ndị otu anyị na ịdị mma gị.
NB: Ọ bụrụ na ịkwụsị nkwalite SEO, a ga-ewepụ backlinks niile, Google ga-ewepu ha na nchekwa data ya n'ime ọnwa ole na ole. Ọ bụrụgodi na ọkwa ị nwetara n’oge mkpọsa SEO ji nwayọ belata, ha ka ga-adị elu karịa nke ị nweburu.
Ọ bụrụ n’itinyela webusaiti ozi ma ọ bụ rụọ ya, ị ga-akpachapụ anya banyere okwu Search Engine Optimization (SEO) ma nụkwa / ejiri otu ngwa ọrụ SEO. SEO tinye robots Google ndị na-abịa na saịtị gị ma kpachie ya maka ịkọwa. Dabere na algọridim ya, ọ bụrụ na Google achọpụta data gị ziri ezi ma zọọ nke ọma, ebe nrụọrụ weebụ gị ga - adị elu na Google n'oge na-adịghị anya. Nke a bụ otu nyocha Google websaịtị si arụ ọrụ.
Ndị crawlers na-enyocha ọdịnaya nke weebụsaịtị gị ma dekọ data dị na nchekwa data ha wee depụta weebụsaịtị gị mgbe nyochachara ya.
Ha na-eji SEO ekpebi ego ole weebụ ị ga-enweta na ihe saịtị ma ọ bụ ihu peeji ga-agba. Nke a bụ ya mere ọ dị nnukwu mkpa iji nyochaa SEO gị. Nke a bụ ihe ngwá ọrụ nyocha nke weebụsaịtị anyị na-enyere gị aka ime.